बागलुङमा ८ बजेबाट मतगणना शुरु - राष्ट्रिय - Radio Kantipur
बागलुङमा ८ बजेबाट मतगणना शुरु
- मंसिर १० गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना बागलुङमा राती ८ बजेदेखि शुरु भएको छ । निर्वाचनमा बुथ कब्जा भएको आरोप लगाएर कांग्रेसले गत साता निर्वाचन आयोगमा दिएको उजुरीको निर्णय आउन ढिलाई भएपछि मतगणनामा पनि ढिलाई भएको हो ।
आयोगले बिहीबार ५ बजे मात्र मतगणना गर्नु भन्ने आदेश दिएपछि काम ढिलाई भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रकाशप्रसाद पंडितले बताउनुभयो ।
‘कांग्रेसका कार्यकर्ता ५ बजेपछि मात्र आएर परिचयपत्र बनाउने देखि सबै प्रशासनिक काम गर्नुपर्दा ढिलाई भयो’ पंडितले भन्नुभयो, ‘अब समस्या हुँदैन ।’ पहिलोपटक क्षेत्र नं. १ को पाला, कुश्मीसेरा र दमेकको गणना गरिएको छ भने क्षेत्र नं. २ मा दुदिलाभाटी, नरेठाँटी र बुर्तिवाङको मतगणना शुरु भएको हो ।
कांग्रेसले धुल्लुबास्कोट, पैयुँथन्थाप र भकुण्डेमा वाम गठबन्धनले बुथ कब्जा गरेर कांग्रेसका कार्यकर्तालाई मतदनन गर्न नदिएको भन्दै उजुरी गरेको थियो । ती स्थानमा कांग्रेसले पुन मतदानको व्यवस्थाको माग गरेको थियो । कांग्रेस सभापति तथा क्षेत्र नं. १ क का उमेदवार दिपेन्द्र बहादुर थापा र १ ख का उमेदवार प्रकाश शर्मा पौडेलले उजुरी दर्ता गरेका थिए । दुई निर्वाचन क्षेत्रको चारचार स्थान गरी ८ स्थानमा मतगणना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
मत गणनाका लागि १ सय २० जना कर्मचारीलाई खटाइएको छ । उनीहरुले पालो गरेर मतगणना गर्नेछन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तोकेका कर्मचारी प्रवेश गरेर मतगणना गर्ने र कांडेतार बाहिरबाट उमेदवारका प्रतिनिधिले हेर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । मतगणना स्थलमा सुरक्षा कडा पारिएको र आचारसंहिता बिपरितका कुनैपनि काम गर्नेलाई तत्कालै कारवाही गरिने उनले जानकारी दिए ।
मंसिर १० गते सम्पन्न निर्वाचनमा बागलुङको क्षेत्र नं. १ मा ५६ हजार ६ सय ७ र क्षेत्र नं. २ मा ५३ हजार ७ सय ५६ मत खसेको थियो । जिल्लामा १ लाख ६७ हजार २ सय ८२ मतदाता छन् । १ सय ९९ मतदान केन्द्रका ५ सय ९७ मतपेटिकाको मत गणना गर्नुपर्नेछ ।
कारागारका कैदीलाई सीडीओले टीका लगाईदिएकार्तिक २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्
पोलिग्राफ टेस्ट गरिनेमा प्रहरी धेरैकार्तिक २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्
धूलाम्मे दाउन्ने सडक काटन घण्टौं लाग्छ कार्तिक २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्
पाल्पामा एक किशोरी बलात्कृतकार्तिक २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्धारा दसैंको टीका ग्रहण कार्तिक २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्
जलबीरेमा सवारी दुर्घटनामा ३ को मृत्यु, २३ जना घाइते कार्तिक २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्
विजयादशमी हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै, टीकाको शुभ साइत ९ बजेर ५१ मिनेटमा कार्तिक २, २०७५ पूरा पढ्नुहोस्